Supernatural Gothica muKutanga Crimson Peak Trailer - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Supernatural Gothica muKutanga Crimson Peak Trailer
Supernatural Gothica muKutanga Crimson Peak Trailer
yakanyorwa na Gareth Cavanagh February 15, 2015
Iyo turera yenguva yaGuillermo Del Toro inotyisa Crimson Peak yakaburitswa online nguva pfupi yadarika. Kuve fan waGuillermo Del Toro kutaura kuti ndiri kufara kuona zvaanoita nepfungwa iyi inonakidza kupokana. Chiitiko chinotyisa muHollywood chave chisina kumira mushe uye chine fomati panguva ino, zvinoita kunge hombe kutyisa bhaisikopo kuburitswa munguva pfupi yapfuura kwave kunofinha, kushaya simba, generic crap. Kusunungurwa mushure mekuburitswa kwemabhaisikopo nezvekushungurudzwa kwemhuri, handisi kuti mweya kana dhimoni rinotyisidzira mhuri harigone kuve akanaka mafirimu akati wandei afara zvakanaka neichi chirevo chakakosha. Nekudaro, zvinoita sekunge mafirimu akashandisa iyi yakakosha rondedzero yekunonoka anga achishayikwa zvachose mukugadzira kwekunyepedzera kana kwekufungidzira.
Kunyangwe ese aya marudzi emamuvhi ari akafanana, vateereri vanoita kunge vachazvipeta, Iyo Conjuring naAnnabelle vakabudirira kwazvo kunyangwe vachishandisa zviyedzo zvakaedzwa uye zvakaedzwa izvo zvisingakwanise kunzi zvinotyisa. Izvo zviri kutaurwa zvinozorodza kuona mumwe munhu saGuillermo Del Toro achiwana bhajeti hombe uye mvumo yekumhanyisa musango nekufunga kwake. Del Toro haasi iye chete nyanzvi yekutaura nyaya asiwo nyanzvi yekuunza kuhupenyu zvinotyisa uye zvinotyisa zvisikwa kubva pakadzika kwekufunga kwake. Aya mafungidziro emamiriro ezvinhu anogara achibaya pa-screen, murume wacho ane hunyanzvi. Ndokusaka zvichinakidza kuti Crimson Peak inosanganisira zvese zvisinganzwisisike pamwe nekuratidzwa kwake kweimwe chete yemauniversiti mukati mepfungwa dzake dzekugadzira. Crimson Peak haingori neye poltergeist uye chipoko vasikana vanogogodza zvinhu pamusoro peguta remuguta, rakamonyoroka mafupa asina kudzika masisitimu achibvarura pasi muimba huru yekare ine zvakavanzika zvisingaperi. Mifananidzo iri mukaravhani iyi inoita kuti ndinakidzwe nekushandurwa kuri kuuya kwaDel Toro kwebhuku reHP Lovecraft: Kumakomo eMadness. Uri kutarisira kuCrimson Peak here? Ino turera inoita kuti uve nechivimbo neDel Toro kubata Lovecraft? Ndizivisei muchikamu chemashoko pazasi.
Kumakomo eMadnessPisa GormanCharlie Hunnamchitsvuku chakakwiriraCrimson Peak tireraCrimson Peak tirera yakaburitswa onlineDoug Jonesnyaya dzechipokogothic rinotyisaguillermo del toroGuillermo Del Toro mafirimuGuillermo Del Toror anotyisa mafirimuHP LovecraftJessica ChastainJim BeaverLeslie TariroMia Wasikowskayanhasi gothic kutyisanguva inotyisa mafirimuTom Hiddlestontarisa iyo Crimson Peak tirera
Humwe Husiku muHaunted Karsten Hotel
James Franco ku Star muStephen King Series '11 / 22/63 '